Modric oo shaaca ka qaaday AFARTA ciyaaryahan uu arko inay u qalmaan ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2019 – Gool FM
(Madrid) 22 Okt 2019. Xiddiga reer Croatia iyo kooxda kubadda cagta Real Madrud ee Luka Modric ayaa u sharaxay ku guuleysig abaal-marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or 2019 afar ciyaaryahan uu ka mid yahay xiddigaha naadiga Liverpool ee Maxamed Saalax.
Majalada France Football ayaa si rasmi ah u shaacisay xalay oo Isniin ah liiska musharixiinta abaal-marinta Ballon d’Or ee ah ciyaaryahanka ugu fiican sanadka 2019, kaasoo ay ku soo baxeen magacyada 30 ciyaaryahan.
Liiska musharixiinta abaal-marinta Ballon d’Or ee 2019 ayaa waxaa ku soo baxay magaca xiddiga xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax oo 27 jir ah, iyadoo ay u aragtay Majalada France Football inuu yahay xiddig aad u saameyn badan kadib markii uu kula guuleystay Reds tartanka Champions League xilli ciyaareedkii tagay.
Haddaba Luka Modric ayaa wareysi gaar ah uu ku bixiyay Majalada France Football ee dalka France wuxuu ku sheegay:
“Waxaa la filayaa in liiska tartameyaasha ku guuleysta abaal-marinta Ballon d’Or ee ah ciyaaryahanka ugu fiican adduunka sanadkan 2019 ay tahay mid aad u xaddidan”.
“Anniga ahaan waxaan dooran doonaa 4 ciyaaryahan si ay ugu guuleystaan abaal-marinta Ballon d’Or, waxayna kala yihiin Maxamed Saalax, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo Van Dijk, waxaan dhamaantood u rajeenayaa wanaag oo dhan”.